चिकित्सकहरूका अनुसार जाडो शुरूभएसँगै शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुँदै जान्छ । त्यसकारण जाडो याममा स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखा पर्छन् ।
जाडो याममा छाला सम्बन्धी समस्या, स्वास प्रस्वास, हाड जोनी दुख्ने, ढाड दुख्ने, रक्तचाप बढ्ने जस्ता समस्या देखिन्छन् । यसबाट जोगिन हामीले हाम्रो वानी, व्यवहार, खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जाडो याममा हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याबाट जोगिन यी ८ काम नगर्नुहोस्
आलुभन्दा बढी लाभदायक छ यसको बोक्रा, जान्नुस् कसरी ?
ब्लू क्रस हस्पिटलमा डाक्टर रंगिनाले गरिन् पहिलो पटक ...
लामो अनि कालो कपाल चाहियो? प्रयोग गर्नुस् यी चिज
कुन कोल्टो सुत्ने गर्नुहुन्छ? देब्रे कोल्टोमा सुत्दा य...
कर्णाली: वैशाख यता बाढीपहिरोमा ४३ जनाकाे मृत्यु, आठ बेपत्ता
सचिव अर्यालको अर्काे निर्णयः काठमाडौं महानगरका गाडी सेतो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्न निर्देशन
भारतमा दिनप्रतिदिन खराब अवस्था, कोरोना सङ्क्रमितको संङ्ख्या १८ लाख नाघ्यो